मर्जरमा जान किन मानेन नविल बैंक ? राष्ट्र बैंकमा प्रतिवद्धता बुझाएन – Clickmandu
मर्जरमा जान किन मानेन नविल बैंक ? राष्ट्र बैंकमा प्रतिवद्धता बुझाएन
क्लिकमान्डु २०७६ साउन ५ गते १८:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नविल बैंक मर्जरमा नजाने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिए पनि नविलले अहिलेसम्म मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएको छैन ।
‘राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिएको हो, त्यसैले हामीले लिखित जवाफ दिनुपर्छ भन्ने ठानेनौं,’ नविल बैंकका एक सञ्चालकले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामी मर्जरमा जान तयार छैनौं । पछि समय र परिस्थितिले मर्जरमा जानै पर्यो भने मात्रै जान्छौं ।’
मर्जरको लागि नबिल बैंकको यस्तो छ तयारी, सीइओ अनिल शाह भन्छन्- मिल्ने संस्था हुनुपर्यो